राधी विद्युतको नाफा करिब २५ प्रतिशत घट्यो - Aarthiknews
काठमाडौं । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ७८ प्रतिशत कम खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष रू. ६ करोड २६ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ४ करोड ७१ लाखभन्दा बढी मात्र यो नाफा गरेको हो ।
यस वर्ष कम्पनीको विद्युत विक्री आम्दानी करिब ५ प्रतिशत कम भएकाले पनि खुद नाफामा कमि आएको हो । गत वर्ष रू. ११ करोड ४७ लाखभन्दा बढी विद्युत विक्री गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १० करोड ९३ लाखभन्दा बढी मात्र विद्युत विक्री गरेको हो । यस वर्ष कम्पनीको सञ्चालनबाट नाफा गत वर्षभन्दा १७ दशमलव २१ प्रतिशत कम रू. ६ करोड ६५ लाख भएको छ ।
कम्पनीले १४७ दशमलव ५२ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाईसकेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा १ बराबर १ दशमलव ४७५२ को अनुपातमा ९५ लाख ३५ हजार ७६० दशमलव ९९ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गर्न आयोगले स्वीकृति पाएको हो । यस वर्ष हालसम्मकै सर्वाधिक लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले शेयरधनीहरुका लागि हकप्रद शेयर समेत जारी गर्न लागेको हो ।